गर्भवतीले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप किन लगाउने? [भिडियो] :: कमला गुरुङ :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
गर्भवतीले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप किन लगाउने? [भिडियो]
कमला गुरुङ बुधबार, साउन ६, २०७८, ०६:०५:००
काठमाडौं - सुरुवाती दिनमा गर्भवती, गर्भधारण गर्न चाहने र स्तनपान गराइरहेका महिलाले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउन नहुने भनिएको थियो। तर हाल उनीहरुले पनि कोरोनाविरुद्धको लगाउन मिल्ने प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञहरुले बताइरहेका छन्।
खोप लगाएरभन्दा पनि नलगाउँदा गर्भवती महिला बढी जोखिममा पर्ने उनीहरु बताउँछन्। त्यसो त यो खोप लगाएर आमा र बच्चालाई असर गर्ने कुरा हालसम्म पुष्टि भइसकेको छैन।
गर्भवती महिला कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहने भन्दै नेपाल प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ समाज (नेसोग) ले कोभिड-१९ विरुद्धको खोप पाउने लक्षित समूहमा राख्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
सुरुवाती दिनमा उनीहरुलाई दिन नमिल्ने भनिए पनि त्यो भ्रम मात्र भएको नेसोगका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डा र्कीतिपाल सुवेदीले बताए। भारत, अमेरिका, बेलायतका प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञहरुले पनि गर्भवतीलाई कोरोनाविरुद्धको दिन मिल्ने निष्कर्ष निकालेको उनले बताए।
उनका अनुसार सन्तानको योजना बनाइरहेका, गर्भवती र स्तनपान गराइरहेका महिलाले पनि कोरोनाविरुद्धको खोप ढुक्कसँग लगाउन मिल्छ।
नेसोगका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डा सुवेदीसँग यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर भिडियो कुराकानी गरेका छौँ। उनीसँग गरिएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः
गर्भवतीलाई पनि कोभिड–१९ विरुद्ध खोपको सूचीमा राख्न नेसोगले सरकारसँग किन माग गरेको हो?
– गर्भवतीलाई कोरोना संक्रमण भए झनै खतरा हुन्छ।
– कोभिड खोपले गर्भवती र शिशुलाई कुनै असर नगर्ने अध्ययनले देखाएको छ।
– गर्भवतीलाई कोरोनाको जोखिम उच्च हुने भएकाले नेसोगले खोपको सूचीमा राख्न माग गरेको हो।
सुरुवाती दिनमा गर्भवती, गर्भधारण गर्न चाहने र स्तनपान गराइरहेका महिलाले कोरोनाको खोप लगाउन मिल्दैन भनिन्थ्यो। ती सबै भ्रम हुन्?
– सुरुवाती दिनमा गर्भवतीलाई कोरोनाको खोप दिन मिल्ने/नमिल्ने विषयमा अध्ययन हुन बाँकी थियो।
– खोप लगाउँदा हुने फाइदा र बेफाइदा बारे जानकारी नहुँदा सुरुको दिनमा गर्भवतीलाई लगाउन भनिएको थिएन।
– हाल भइरहेका अध्ययनले उनीहरुलाई पनि लगाउन मिल्ने भएकाले हामीले पनि माग गरेका हौँ।
गर्भवतीले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप किन लगाउने?
– आम मानिसभन्दा गर्भवती महिलाहरु कोरोनाको उच्च जोखिममा पर्छन्।
– कोरोनाबाट बच्ने एक मात्र विकल्प खोप भएकाले गर्भवती र स्तनपान गराइरहेका महिलाले खोप लगाउनैपर्छ।
गर्भवतीलाई कोरोना संक्रमण भए के कस्तो जोखिमहरु निम्त्याउँछ?
– गर्भवती एक संवदेनशील अवस्था भएकाले विशेष हेरचाहको आवश्यक पर्छ।
– गर्भवतीलाई कोरोना भए फोक्सोमा झनै असर गर्छ।
– आमालाई खतरा हुने भएपछि शिशुलाई चाँडै निकाल्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ।
त्यसो भए गर्भवती, गर्भधारण गर्न चाहने र स्तनपान गराइरहेका महिलाले ढुक्कसँग कोभिडको खोप लगाउँदा हुन्छ?
– भारत, अमेरिका, बेलायतका प्रसुति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञहरुले पनि यो खोप लगाउन सुझाव दिइसकेका छन्।
– खोप नलगाउँदा नै उनीहरु बढी जोखिममा पर्छन्। त्यसैले खोप लगाउनैपर्छ।
गर्भवतीलाई पनि कोभिडको खोप पाउने लक्षित समूहमा राख्नका लागि नेसोगले सरकारलाई पहल स्वरुप केही गरेको छ?
– स्वास्थ्य मन्त्रालयसहित अन्य निकायलाई आग्रह स्वरुप पत्र बुझाएका छौँ।
– उहाँहरुले यो विषयमा निर्णय गर्न केही समय लाग्ने जवाफ हामीले पाएका छौँ।
– हामीले नियमित रुपमा सरकारलाई यो विषयमा पहल गरिरहने छौँ।
अन्त्यमा यहाँको थप केही सुझावहरु छन् कि?
– कुनै पनि डर र आशंका नगरी कोभिडविरुद्धको खोप ढुक्क भएर लगाउन म आग्रह गर्छु।
– खोप लगाइसकेपछि गर्भधारण गर्न नमिल्ने भन्ने विषयमा कुनै सत्यतता छैन।